Ukwenza ibrashi, ukuXhoboza kunye noMatshini wokuThintela | UMatshiniXin Brush kuMatshini
Umshini ozinzileyo osemgangathweni wokwenza umatshini wentengiso apha.
I-MX200 yobuchwephesha ijijiwe umenzi wokwenza umatshini
I-MX200 yobuchwephesha ijijile abenzi bomatshini bokwenza i-brushUmatshini wokwenza i-MX200 ojijekileyo unamava atyebileyo ekusebenzeni kwe. Sineenkqubo zemveliso esemgangathweni kunye nobuchwephesha bemveliso yobugcisa. Siqinisekisa ukuba iimveliso zethu zikhuselekile, zithembekile kwaye zikumgangatho ophezulu.Imveliso ibe yinto ekugxilwe kuyo kolu shishino kwaye yamkela ithemba eliqaqambileyo lesicelo. MX200 umatshini wokwenza ibrashi ephothiweyoUluhlu olubanzi lovavanyo lwe-MEIXIN lwenziwe. Ezi mvavanyo zibandakanya uvavanyo lweengozi ze-arc, uvavanyo lwekhabhathi, uvavanyo lokuhambelana kombane (EMC), kunye novavanyo lokusebenza
I-3 Axis eyodwa yeHockey Brush yokwenza Umatshini
Siza kukhetha okanye senze ngokwezifiso oomatshini bokwenza ibrashi ngokweentlobo zemveliso yakho. Senze umzi we-2-5axis wekhaya kunye nebrashi yomzi mveliso kunye noomatshini bomtshayelo iminyaka eli-17 +.
I-China i-4 ye-Axis yoMatshini wokuSebenza oMatshini oSebenzayo-MEIXIN
Siza kukhetha okanye senze ngokwezifiso oomatshini bokwenza ibrashi ngokweentlobo zemveliso yakho. Senze umzi we-2-5axis wekhaya kunye nebrashi yamashishini kunye noomatshini bomtshayelo ngaphezulu kweminyaka eli-17.I-MEIXIN i-China i-Axis abaSebenzi abaSebenzayo abaMatshini aba-MEIXIN
China Umatshini wokwenza ibrashi enkulu yediski 5Axis abavelisi-MEIXIN
China Umatshini wokwenza ibrashi enkulu yediski 5Axis abavelisi-MEIXINI-MEIXIN yenziwa phantsi kwenkqubo yolawulo lwangoku.I-5Axis 1drilling 1 umatshini wokujija. Filament ubude 300mm.
Umatshini wokubrawuza oSebenzayo kunye nabavelisi beRhafu yebrashi
Umatshini wokubrawuza oBuchule kunye noMvelisi weRhafu yebrashi
Eyona MX210 yeNcwadi yangasese yokuCoca ibrashi yokuCoca uMatshini
Eyona MX210 yeNcwadi yangasese yokuCoca umatshini yokuCoca uMatshini-. MX210 Umatshini wokuhambisa isixhobo sokuCoca ibrashi, I-MEIXIN iyilwe ngeendlela ezahlukeneyo ngabaqulunqi. Ukuba nefeni ephezulu okanye kwicala yeyona nto ixhaphakileyo kuba olu hlobo luthintela amathontsi ekubetha izinto ezifudumezayo. MX210 Manual iToilet Brush Trimming Machine Umgangatho wexabiso unokuqinisekiswa yi-MEIXIN.
I-China MX211 Manual Broom Trimming Machine abavelisi
I-China MX211 Manual Broom Trimming Machine abavelisi-. I-MX211 Manual Broom Trimming Machine MEIXIN yenziwe ngokudibanisa ubuchwephesha obuphambili kunye nezixhobo ezisemgangathweni ophezulu. Abaqulunqi basebenzela i-JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., I-LIMITED idume kwihlabathi jikelele. MX211 Umatshini wokucoca umatshini wokubambisa umatshini Inkqubo yokuvelisa ye-MEIXIN igubungela izinto ezininzi. Kukungqinisisa kwengqondo, uyilo lwephethini, isampulu, ukusika iipateni, ukuthunga, ukugqiba, ukuhlamba kunye novavanyo lomsebenzi.
Eyona nto intle yokucoca umatshini kwi-MX212 kunye nomnikezeli woomatshini abahlaselayo
Eyona nto intle yokucoca umatshini kwi-MX212 kunye nomnikezeli woomatshini abahlaselayo. MX212 Ukucuthwa komatshini okuzenzekelayo kunye Nokuchwetheza ngomatshini kushushu kuThengise ngaphakathi. Xa abasebenzisi sele benze ngokubhala okanye ukuzoba, le mveliso inikezela ukufikelela kwiikhompyuter yeWindows kunye neMac ukugcina umsebenzi wabo. I-MX212 yokuLungiselela ukuKhangela kweKhitshi ngokuzenzekelayo kunye noomatshini abahlaselayo Abasebenzi abanobuchule kunye noluhlu lwezixhobo baqinisekisa umgangatho wemveliso.
HighQuality I-WHMX 001 yePneunatic Filament Cutting Machine Wholesale
HighQuality I-WHMX 001 yePneunatic Filament Cutting Machine Wholesale-. I-WhMX 001 Umatshini wokusika i-Pneunatic Filament Imveliso isebenza ngokuthe cwaka kungekho msindo ucaphukisayo kunye nesandi esibuyisayo emva kokusetyenziswa ixesha elide, esivumela abasebenzisi ukuba bahlale kwindawo ezolileyo. Uyilo lwalo luye lwanceda i-JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED liphumelele imakethi. I-WhMX 001 Umatshini wokusika i-Pneunatic Filament ........
I-Meixin Brush Ukwenza umboniso woomatshini
Sivelise iintlobo ezahlukeneyo zamakhaya kunye neebhulashi zemizi mveliso, izindlu zibandakanya iibhulashi zangasese, iibhlorho, iibhulashi zewockey, ibrashi yokuhlamba iinwele, kunye neebhulashi zeebhotile, kunye nezoomzi mveliso kubandakanya ibhulashi yokuqengqeleka, ibrrashi yendlela kunye nokutshayela imitshana yesitalato.
Isantya esiphezulu 2 Umatshini webrashi yeAxis
Siza kukhetha okanye silungiselele imitshini eyahlukileyo yokwenza oomatshini kuwe ngohlobo lweemveliso zakho. Senze i-2-5axis yendlu kunye nebrashi yokushicilela kunye noomatshini broom iminyaka eli-17+.